Ny tia no vola sarobidy indrindra amin'ny Instagram. Rehefa mahazo tiako kokoa ny hafatrao Instagram, miseho ambony kokoa amin'ny vaovaon'ny mpampiasa izany. Amin'ny fampitomboana ny isan'ny tianao, ianao koa dia miantoka ny fahitana bebe kokoa ho an'ny hafatrao ho avy, satria manandrana mampiseho amin'ny olona bebe kokoa ny zavatra tian'izy ireo teo aloha ny algorithm momba ilay sehatra.
Nanangona ity torolàlana ity izahay momba ny fomba hahazoana tian'ny Instagram hanampy anao hahazo ireo tombony ireo..
Ireto misy soso-kevitra dimy ambin'ny folo:
1. Tsinjarao ny sary avo lenta
Tokony handeha tsy hiteny izany, fa maro ny olona manamaivana ny maha-zava-dehibe ny fananana sary avo lenta. Tsy ho be mpitia ianao raha grainy ny sarinao, pixelated na maizina loatra.
2. Mamorona lohateny mahaliana
Raha tena ilaina ny misintona sary avo lenta, tsy ampy izany ; tokony hahaliana koa ny famaritanao, manintona na manankarena amin'ny sanda fanampiny.
3. Mampiasà antso ho amin'ny hetsika
Tsy ho afaka hanome anao izay tadiavinao ny mpihaino anao raha tsy teneninao aminy izay tianao. Ampidiro fotsiny ny antso ho amin'ny hetsika any amin'ny faran'ny caption-nao mba hangataka J'aime. Mety hampitombo be ny isan'ny mpanatrika ny fangatahana tsotra amin-katsaram-panahy..
4. Fahatakarana ny mpihaino anao
Efa nandre izany ianao taloha, dia ho renao indray izany. Mila mahafantatra tsara ny mpihaino anao ianao.
5. Asio Geolocation amin'ny lahatsoratra tsirairay
Rehefa manontany ny olona ny fomba hahazoana tiana ao amin'ny Instagram, ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony hatao dia ny mahita raha mampiasa geotagging amin'ny sariny izy ireo. Ity ny lahatsoratra “toerana” izay miseho eo ambonin'ny sary.
6. Isan'andro, Asio j'aime sy commentaire
Te hahafantatra ny fomba hahazoana tia ao amin'ny Instagram? Tsy maintsy manome azy ireo ianao ! Instagram dia lalana roa. Mila mandany fotoana hifaneraserana amin'ny olona ianao raha te hanatsara ny fandraisanao anjara.
7. Ampiasao ny Hashtags mety
Te hahafantatra ny fomba hahazoana sitraka bebe kokoa amin'ny Instagram ? Ampiasao ny tenifototra mety ! Zava-dehibe izany fa tsy hampisondrotra ny tianao fotsiny, fa koa ho an'ny paikadinao Instagram manontolo.
8. Amporisiho ny hafa “Tagger an Ami”
Mba ahazoana sitraka bebe kokoa amin'ny Instagram, tokony ho hitan'ny olona maro kokoa ny sarinao. Mampiasà antso ho amin'ny hetsika tsotra izay mandrisika ny mpihaino anao hanome marika anarana namana amin'ny hafatrao farany mba hampitombo haingana ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny fahana anao.
9. Ampiasao tsy tapaka ny tantara Instagram
Tantara Instagram comptent 500 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde en janvier de cette année, izay milaza fa zava-dehibe loatra ny tantara ka tsy azo tsinontsinoavina. Ny fampiasana Stories dia tsy mamela anao hanatratra mpihaino midadasika fotsiny, fa afaka mitondra fifamoivoizana amin'ny hafatrao vao haingana koa izy io ary manatsara haingana ny tianao!
10. Amporisiho ny marika ankafizinao na mampiantrano Sfs
Nanaraka kaonty manokana ianao tato ho ato ? Ampahafantaro azy ireo amin'ny fanonona azy ireo ao amin'ny lahatsoratrao na ny tantaranao. Hahazo fampandrenesana izay rehetra voamarika ao amin'ny lahatsoratrao, ary azo antoka fa ho tonga ao amin'ny sakafonao izy ireo ary hanome anao tia.
11. Lazao ao amin'ny lahatsoratrao ny kaontin'ny havanao
Amin'ny lahatsoratra rehetra alefanao, mariho ny olona sy ny orinasa voakasika. Ny fametahana azy ireo ao amin'ny hafatrao dia mitovy amin'ny fanomezana azy ireo fitenenan-dratsy raha mbola ampahafantarina azy ireo ny reference., izay misarika ny sain'ny marika sy ny mpihaino azy!
12. Mikarakara fifaninanana
Tsy mahafinaritra ho an'ny mpankafy anao ny fampiantranoana fifaninanana Instagram, fa mety hampiakatra be ihany koa ireo tianao sy famandrihana. Ny filazana amin'ny mpandray anjara fa tsy maintsy tia ny entanao izy ireo vao afaka miditra amin'ny fifaninanana dia afaka manampy anao hampitombo be ny tiana..
13. Fantaro amin'ny sehatra hafa
Ny fampiroboroboana ny fitaovanao dia ohatra tsara amin'ny fomba hahazoana tiana bebe kokoa amin'ny Instagram. Satria tsy ny mpihaino anao rehetra no hahita ny hafatrao amin'ny Instagram, mila mahazo antoka ianao fa ny fitaovanao Instagram dia azon'ny mpihaino anao amin'ny tambajotra sosialy rehetra ampiasainao.
14. Mamoaha tsy tapaka
Tsy afaka manantena hahazo tia bebe kokoa ianao raha tsy mijery ny lahatsoratrao ny mpihaino anao. Ny fandaharam-potoana fandefasana tsy tapaka dia mitazona ny orinasanao ho eo an-tampon'ny sain'ny olona, Mahazo toerana tsara ianao miaraka amin'ny algorithm an'ny Instagram ary afaka mampitombo be ny tianao avy amin'ny frame mankany amin'ny frame.
15. Dokam-barotra karama
Ny zavatra farany azonao atao mba hampitomboana ny tian'ny Instagram anao dia ny fidirana amin'ireo safidy dokam-barotra karama ao amin'ny Instagram.. Amin'ny ankapobeny, Manoro hevitra izahay hampiasa dokam-barotra karama mba hitarihana mpitsidika amin'ny pejy fidirana na fivarotana maimaim-poana, fa ny doka dia afaka manampy anao hahazo tia bebe kokoa.
na izany aza, ireo hevitra ireo dia tsy ho ampy hanampy anao hampitombo ny tianao ao amin'ny Instagram. Afaka manampy anao ny fampiasana fampiharana mahazo tia bebe kokoa amin'ny Instagram. Mety hafahafa toa ny mividy mpanaraka azy io, fa toe-javatra hafa tanteraka io.
Ao anatin'izany ny endri-javatra sy ny fahaiza-manao rehetra ilain'ny olona mila mitantana ny kaontiny Instagram.. Azonao atao ny mamaritra ny mombamomba anao manokana, ankoatry ny tia mandeha ho azy. Ny Grow Social dia misy ihany koa ny fandaharam-potoana amin'ny fandaharam-potoana lahatsoratra sy tantara.
Like4Like dia iray amin'ireo fampiharana mora indrindra hahazoana J'aime. Ity rindrambaiko ity dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakambanana ireo mpampiasa ary manao azy ireo ho toy ny votoatin'ny olon-kafa ; ny hafatra tianao kokoa, arakaraky ny hitiavako anao indray.
Likulator dia miasa hafa kely amin'ny fampiharana fikarohana Jaime hafa. Izy io dia mahatonga ny traikefa hahafinaritra kokoa amin'ny fanomezana valisoa anao vola madinika noho ny fitiavanao ny lahatsoratry ny olon-kafa sy ny mijery doka., izay azonao atakalo avy eo “tiako” SY “famandrihana”. Ahitana tenifototra ihany koa ilay rindrambaiko hanampy anao hahazo laza.
4. Tia an'i Hash
Tia an'i Hash, etsy ankilany, dia tsotra sy mora ampiasaina. Asaina miditra ianao, dia misy lisitry ny lohahevitra atolotra anao, izay ahafahanao misafidy ny tenifototra tianao indrindra. Rehefa avy nijery doka sasany, hanolotra tian-jatony aminao ny fampiharana.
Lahatsoratra teo alohaAuto Toy ny Instagram: Bot ho an'ny tiana mandeha ho azy
Lahatsoratra manarakaAhoana ny fomba hahazoana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram Cheat Sheet : #Torolalana n ° 1